PCb တပ်ဆင်ထုတ်လုပ်သူ - SHENZHEN KAISHENG PCB CO ။ , LTD
PCB Assebmly ထုတ်လုပ်သူ - PCBFuture
ပုံနှိပ်တိုက်ဘုတ်အဖွဲ့များ၊ ရှေ့ပြေးပုံစံ PCB ပရိသ, PCB ပရိသထုတ်လုပ်သူ
PCBFuture သည်ကျွမ်းကျင်သော PCB တပ်ဆင်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံသည်တရုတ်နိုင်ငံရှိ PCB ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနှင့် PCB Assembly ၀ န်ဆောင်မှုများကိုကျွမ်းကျင်သော၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် PCB ထုတ်လုပ်မှုမှ PCB တပ်ဆင်ခြင်း၊ စမ်းသပ်ခြင်းနှင့်အိုးအိမ်အထိ turnkey ဝန်ဆောင်မှုကိုပေးနိုင်သည်။
PCBFuture PCBA ပရိသပေးပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ် SMT စက်ရုံတွင်ကမ္ဘာ့အဆင့်မီဖယောင်းစက္ကူပုံနှိပ်ခြင်း၊ SMT ချစ်ပ်ရွေးခြင်းနှင့်နေရာချထားခြင်း၊ ဂဟေဆက်ခြင်း၊ အွန်လိုင်းစမ်းသပ်ခြင်းနှင့်သံမဏိကွက်များထုတ်လုပ်ခြင်းကဲ့သို့သောအဆင့်မြင့်ကိရိယာများရှိသည်။ အရည်အသွေးစစ်ဆေးမှုအတွက် AOI စမ်းသပ်မှုနှင့် X-Ray စမ်းသပ်စက်များ။
ရှေ့ပြေးပုံစံ pcb-assembly ကဘာလဲ?
ရှေ့ပြေးပုံစံပုံနှိပ်တိုက်နယ်ဘုတ်အဖွဲ့ (PCB) အသင်းတော်များတွင်နာမည်များစွာရှိသည်။ သင်မကြာခဏကြားလေ့ရှိသောအခြားအမည်များမှာမျက်နှာပြင် - တပ်ဆင်နိုင်သောနည်းပညာ (SMT) PCB ရှေ့ပြေးပုံစံများ၊ PCBA ရှေ့ပြေးပုံစံတပ်ဆင်ခြင်း၊ PCB နမူနာတပ်ဆင်ခြင်းစသည်တို့ဖြစ်သည်။ ရှေ့ပြေးပုံစံ PCB Assembly ဟူသောအသုံးအနှုန်းသည်အီလက်ထရောနစ်ဒီဇိုင်းအသစ်များ၏လုပ်ဆောင်မှုကိုစမ်းသပ်ရန်အသုံးပြုသောလျင်မြန်သောရှေ့ပြေးပုံစံ PCBA ကိုရည်ညွှန်းသည်။ ၄ င်းတို့သည်အရည်အသွေးအာမခံချက်၊ စမ်းသပ်ထုတ်ကုန်နှင့်ပြproblemနာမရှိကြောင်းစစ်ဆေးခြင်း၊ အမှားအယွင်းများရှာဖွေခြင်းနှင့်ဒီဇိုင်းကိုမွမ်းမံခြင်းများဖြင့်ကူညီသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်အစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်ခြင်းမပြုမီ၊ အီလက်ထရောနစ်စီမံကိန်းတစ်ခုသည်အရာရာတိုင်းကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်နေစေရန်သေချာစေရန် PCB တပ်ဆင်မှု၏ရှေ့ပြေးပုံစံ PCB တပ်ဆင်မှု ၂-၃ ကြားတွင်လိုအပ်သည်။
အဘယ်ကြောင့်အတွက် PCBFuture ကိုရွေးချယ်ပါ PC လုပ်ကြံလီဆယ်မှုများနှင့်ပရိသ ?
ယုံကြည်စိတ်ချရသောအစိတ်အပိုင်းများကိုလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသောအစိတ်အပိုင်းများဖြန့်ဖြူးသူများမှသာ Arrow၊ အနာဂတ်လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ၊ Digi-key, Mouser ...
ယုံကြည်စိတ်ချရသော PCB မိတ်ဖက်၊ ၁၅ နှစ် PCB မိတ်ဖက်၊ SGS ...
One-stop service, PCB ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ PCB တပ်ဆင်ခြင်း၊ အစိတ်အပိုင်းအရင်းအမြစ်ရှာဖွေခြင်း ...
PCB တပ်ဆင်မှုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိက ၀ န်ဆောင်မှုများ -
AOI စစ်ဆေးခြင်း -
ခ။ 0201 အထိအစိတ်အပိုင်းများအတွက်စစ်ဆေးမှုများ "
ဂ။ ပျောက်ဆုံးနေသောအစိတ်အပိုင်းများ၊ offsets၊ မမှန်ကန်သည့်အစိတ်အပိုင်းများ၊
ခ။ မိုက်ခရို BGA များ
ဂ။ Chip စကေး packages များ
အီလက်ထရွန်နစ်လှိုင်းဂဟေဆက်စက်ဖြင့် PCBFuture သည်အရည်အသွေးနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်ထိန်းချုပ်မှုကိုရရှိသည်။ ဆားကစ်ဘုတ်များတပ်ဆင်သောအခါမြေနှင့်အာဏာအလွှာများ၊ မြင့်မားသောလက်ရှိဆက်သွယ်မှုများသို့မဟုတ် A-type အမျိုးအစားများရှိသည်။ AOI များအားလုံးကို QC.IPQC မတိုင်မီစစ်ဆေးသည်။
dip-coating နှင့်ဒေါင်လိုက်မှုန်ရေမွှားအပေါ်ယံပိုင်းနှစ် ဦး စလုံးရရှိနိုင်ပါသည်။ ဆားမှုန်ရေမွှား၊ အစိုဓာတ်၊ မှို၊ ဖုန်မှုန့်များနှင့်ပြင်းထန်သောပတ် ၀ န်းကျင်များကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သောချေးများကြောင့်အီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်းများကိုပျက်စီးမှုမှကာကွယ်ရန်ပုံနှိပ်ဘုတ်ပြားတပ်ဆင်မှုတွင်အသုံးပြုထားသောလျှပ်ကူးလျှပ်ကူးအလွှာကိုကာကွယ်ခြင်း။ အပေါ်ယံလွှာကိုသုတ်လိမ်းပြီးရှင်းလင်းပြီးတောက်ပသောပစ္စည်းအဖြစ်မြင်နိုင်သည်။
PCBFuture အားလုံးသည် IPC2 စံနှုန်းများနှင့်ကိုက်ညီသည်။ 0201 အပါအ ၀ င် BGA, UBGA, CSP နှင့်အသေးစားပရိုဖိုင်း passives များကို ၁၈ နှစ်ကြာအတွေ့အကြုံရှိပြီးကျွန်ုပ်တို့သည် SMT လိုအပ်ချက်များအတွက်အမြတ်အစွန်းမြင့်သောအဖြေတစ်ခုပေးပါသည်။
5.Pin မှတဆင့် - အပေါက်ညီလာခံ
တိပ်နှင့်တိပ်လိပ်ထားခြင်း၏အရွယ်အစား။ အများဆုံး PCB အရွယ်အစားမှာ 40 "x 40" ဖြစ်သည်။ နေရာချထားမှုနှုန်းသည်တစ်နာရီလျှင် ၁၅,၀၀၀ အပိုင်းအခြားသို့ရောက်ရှိပြီးတိကျမှန်ကန်မှုသည် ၉၉% အထိရှိရာ၎င်းသည်အစိတ်အပိုင်းဆုံးရှုံးမှုကိုလျော့နည်းစေသည်။
PCBFuture အတွက်ဖြေရှင်းနည်းနှစ်ခုရှိသည်။ ခဲနှင့်ခဲပါဝင်သောဂဟေဆက်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်။ တစ်ခုချင်းစီကိုဖြေရှင်းချက်အခန်းတစ်ခန်းနှစ်ခုလွတ်လပ်သောနေရာများသို့ခွဲခြားထားတယ်။ ဒါကြောင့်စိတ်ရှုပ်ထွေးစရာမရှိဘူး။
7.Complete box ကိုတည်ဆောက်
ထိပ်တန်းအမှတ်တံဆိပ်အနေဖြင့် PCBFuture သည်ကြီးမားသောလူမှုရေးတာ ၀ န် ၀ တ္တရားများနှင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာတာ ၀ န်များကိုထမ်းဆောင်ရန်၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပြိုင်ဆိုင်မှုတွင်အပြည့်အ ၀ ပါ ၀ င်ရန်နှင့်ကမ္ဘာ့အဆင့်မီ PCB ထုတ်လုပ်သူဖြစ်လာရန်ကြိုးပမ်းသွားမည်ဖြစ်သည်။